Sawiro Maxaabiista Ciidanka Itoobiya oo lagu wareejiyay Odayaal ka soo jeeda Soomaali Galbeed. – Xeernews24
Sawiro Maxaabiista Ciidanka Itoobiya oo lagu wareejiyay Odayaal ka soo jeeda Soomaali Galbeed.
31. Dezember 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Labo Askari oo Itoobiyaan ayaa shalay galinkii dambe waxaa lagu wareejiyay Waxgarad ka yimid dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxaana Maxaabiistaasi wareejiyay waxgarad ka socday degmada Galinsoor iyo Wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale maanta ay degaanka Kaxandhaale ay dhici doonto Munaasabad ay garwadeen ka yihiin waxgaradka dowlad degaanka Soomaalida oo lagu wareejinaayo hub ay leedahay dowladda Itoobiya oo Galmudug lagu heystay.
Mas’uuliyiintii dowladda Soomaaliya ay u dirtay degaanka Galinsoor ayaa Ku guuldareystay in ay wali xal ka gaadhaan labadda dhinac, waxaana muuqata in waxgaradka labadda Beelood ay waddaan dadaallo lagu heshiisiinaayo Maleeshiyaadka dagaallamay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/maxaabiis.jpg 853 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-31 18:36:452018-12-31 18:36:45Sawiro Maxaabiista Ciidanka Itoobiya oo lagu wareejiyay Odayaal ka soo jeeda Soomaali Galbeed.
Siyaasi Rayaale Xaamud oo luqad adag kula hadlay is maamulka Canfarta Cadeymo muujinaya halka sidda qarsoodigga ah loogu aasay meydka Jamaal Khaa...